तक्मामा मेरो नाम - परिहास - नेपाल
केही अघिको कुरो हो । राष्ट्रपति महोदयाबाट विभिन्न महानुभावलाई पदक एवं तक्मा वितरण कार्य सम्पन्न भयो । तक्मा पाउने महानुभावको नामावली एक दिनअगावै इन्टरनेट पत्रपत्रिकामा आइसकेको रहेछ । अब पदक पाउनेमा कोही चिन्नेहरु पनि पर्‍या छन् कि भनेर म नाम पढ्नतिर लागेँ । सरसर्ती नाम पढ्दै थिएँ, अचानक आफ्नै नाम पनि छापिएको देखेर चकित भएँ । तक्मा पाउनेहरुको सूचीमा मेरो पनि नाम ! अरे, यो के भएको ? मेरो आश्चर्य करिब–करिब विस्फोटक शैलीमै प्रकट भयो ।
वास्तवमा मैले त्यो तक्मावाला सूचीमा पर्ने गरी आजसम्म कुनै कामै गरेको छैन । न मैले बालुवाटारको जग्गा बेच्ने काम गरेको छु, न मेडिकल माफियासँग मिलेर स्वास्थ्यमा व्यापारको काम गरेको छु, न त घूस खाएर अपराधीलाई छाड्ने काम गरेको छु । त्यस्तो केही काम गरेको छैन । तर पनि यो तक्मा किन ?
सोच्दै गएँ । हेर्दै गएँ । सोच्दै जाँदा पो थाहा भयो । त्यहाँ छापिएको नाम मेरो होइन रहेछ । त्यो त मेरै नामसँग मिलेको अर्कै मान्छेको पो रहेछ ।
मैले खुइय्य सास फेरेँ । फोक्सो चिसो हावाले डम्म भरियो ।